Translation of Shona language in English
Shona language Translation Online Translation > English Translation > Shona language Translation Babylon 10
Dictionary definition of Shona language Synonym of Shona language in thesaurus More Languages:[top]
Shona language Translation On Other Language:
Shona language in English Shona , or chiShona, is a Bantu language, native to the Shona people of Zimbabwe and southern Zambia; the term is also used to identify peoples who speak one of the Shona language dialects: Zezuru, Karanga, Manyika, Ndau and Korekore. (Some researchers include Kalanga: others recognise it as a language in its own right.) Shona is a principal language of Zimbabwe, along with Ndebele and the official business language, English. Shona is spoken by a large percentage of the people in Zimbabwe. Other countries that host Shona language speakers are Zambia, Botswana and Mozambique.
English to English translation of Shona language Babylon